Sister Zipporah iyo Rachael aragtida rayrayn | Apg29
"Maxaad, sababta u degdegay aadan samayn wacdinta? Ma aad arki karaa? Waxaa jira waqti dheeraad ah lahayn!"
Waxkasta waxay ila noqdeen si caadi ah, ma jiro hadlay ama wacdiyey oo ku saabsan rayrayn. Qof walba maleeyeen Shuqliso noloshooda iyaga u gaar ah. Markaas si lama filaan waxaa jiray rayrayn.
Waxaan weydiiyey, iyo marka aan weydiiyo yimid markii Rabbi Ciise Masiix, iyo Malaa'igtu xad-dhaaf ah ee qolka. Inkastoo Michael iyo Gabriel, oo ay jidka u bannaysay for ammaanta King markuu yimid. Ciise waxa uu ahaa mid aad u murugo leh. Wuxuuna ku qayliyey oo waxay i tustay wixii ka dhacayay samada laba maalmood ka hor.
Ilaah markaas siiyey amar ay ku malaa'ig buunankay buunka ugu dambeeya. Markii malaggii inay afuufaan Ciise arkay dhulka. Oo wuxuu arkay sinada, sino, shar, dadka lahayn fiiro gaar ah u Ilaah.
Ciise goortuu arkay, ayuu u cararay cagaha Aabbaha, hoos u dhaceen oo bilaabay qaylinaya, oo la weydiiyay wakhti dheeraad ah oo wuxuu ku yidhi:
"Waxay diyaar ma tahay!"
Ciise aad u badan ku qayliyey, oo Aabbuhuna uu ahaa sidaas naxariis badan dunida, laakiin wuxuu sheegay in:
"Wakhtigii waa yimid!"
Isagu waa daalay dhigo.
Laakiin aabbihii ayaa malaa'igtii baa ku tidhi:
Markaasaa malaa'igtii ma uusan buunka yeedhin, laakiin meel la mid ah. Ciise wuxuu ku yidhi, waa in ay la yeesheen labo maalmood ka hor. Ciise ayaa ku dhawaaqay oo wuxuu ku yidhi:
"Waa maxay nooca wadnaha waxay ku? Stone Hearts? Haddii aan soo gaareen labo maalmood ka hor, qaar badan ayaa laga tagay, sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha qoyskaaga. Maanta maalintii in dhibaatadii weynayd noqon lahaa."
Waxa uu sheegay in,
"Carruurta O My, haatan iigu timaadeen. Dhib weyn ku noqon doona cabsi. Waxaan ballan qaaday in aan ka tago kumana dayrin aad, laakiin maxaad ii soo tagay? Metsys qalbigayga loogu talagalay carruurta My iga tagay!"
Gacaliyayaalow, xalay ayaan u lahaa aragti of rayrayn. Waxaan arkay dhulka ahaa mid aad u mashquul leh hawlaha. Waxa ay ahayd wax walba oo ay sii wadi doonto sidii ay ahaan jirtay oo dhan. Waxaan u muuqday si tartiib ah hoos u socda our wadada, riixdey markii aan iga dambeeya, Ciise eegay. Waxa uu sheegay in,
Waxaan arkay in taasu dhacay on Sunday a, oo dad badan ay ka tageen. In kaniisad meesha kaliya ee wadaad iyo xaaskiisa baxay, waxay ahaayeen kaliya ee aaminka ah. uurka hooyada baaba'aan, laakiin waxay ku hadhay.
Oo haddana waxaan arkay Masiixiyiinta ah kuwaas oo u maleeyay in ay ahaayeen aamin, laakiin ka hadhay, oo waxay lahaayeen duudduuban, taas oo Dambigooda Dartiis waxaa laga soo minguuriyay. Waxaan arkay wadaad ah kuwaas oo waxaa jiray markii uu helay kitaabkii duudduubnaa uu dembiyo in uu keeno in uu ku hadhay. Markaasuu bilaabay inuu ku qaylo:
"Sidaa darteed idinkuna diyaar ahaada, waayo, saacad aydnaan u malaynaynin, Wiilka Aadanahu wuxuu soo socda!" Mat 24: 44
"Xusuusnow hustru.den Luudh doonaya inay helaan naftiisa, waa lumin doonaa, laakiin kan naftiisa u lumiya badbaadin doona!" Lk.17: 32, 33